V:1 အကောင်းမြတ်ဆုံး ယေရှုဘုရားသာ အကြီးမြတ်ဆုံး ယေရှုဘုရားသာ အမြင့်မြတ်ဆုံး ယေရှုတစ်ပါးတည်းသာ V:2 အသန့်ရှင်းဆုံး ယေရှုဘုရားသာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ယေရှုဘုရားသာ ချီးမွမ်းခြင်း ခံထိုက်သောသခင်ပါ PRE: အနှိမ့်အမြင့်တွေကြုံလည်း ချီးမွမ်းမယ် အဆိုးအကောင်း အခြေနေထက် ကိုးကွယ်မယ် CHO: ( ဘုန်းကြီးခြင်း အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံ တန်ခိုးကြီးခြင်း အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံ ချီးမွမ်းခြင်း ခံထိုက်သောသခင်ပါ ) 2
verse: အသက်ရှိ ‌သောသူအ‌ပေါင်း ကိုယ်‌တော်အားချီးမွမ်းကြ ဂုဏ်‌တော်ချီးမွမ်းသံများ ကမ္ဘာ‌မြေပြင်တစ်ခုလုံး ပျံ့နှံ့စေ အ‌ရှေ့ နဲ့အ‌နောက်‌တောင်‌မြောက်ပင်လယ်လှိုင်း‌ကျောက်‌ဆောင် သံပြိူင်ကျူးဧသံများ ကမ္ဘာ‌မြေပြင်တစ်ခုလုံးပျံ့နှံ့စေ ‌Pre cho: အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထ‌မြောက်ခဲ့ပြီ‌ဟေ့ မာရ်နတ်အားအလဲထိုးခဲ့ပြီ‌ဟေ့ ထာဝရငရဲမှလွတ်‌မြောက်ခဲ့ပြီ‌ဟေ့ ထာဝရအသက်ရရှိခဲ့ပြီ‌ဟေ့ ‌ ယေရှု ‌ကြောင့်သာ Cho: လွတ်‌မြောက်ခြင်းနဲ့ကခုန်မယ် ဝမ်း‌မြောက်ခြင်းနဲ့ကြွေး‌ကြော်မယ် အိုး..လွတ်‌မြောက်ခြင်းနဲကခုန်မယ် ဝမ်း‌မြောက်ခြင်းနဲ‌ကြွေး‌ကြော်မယ် ကိုယ်‌တော်ရှေ့မှာ
Verse: ကိုယ်တော်ရှင်သာ ကျွုန်ုပ် အလုံးစုံ ကိုယ်တော်သာ မြင်တွေ့ချင် ကိုယ်တော်ရှင်သာ ကျွနု်ပ်ရဲ့ဘဝ ကိုယ်တော်သာ လိုချင်သည် Cho: လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်သောအခါ ကိုယ်တော်သာ ကျွနု်ပ်ရဲ့ ကျောက်ဆောင် ရင်ခွင်ထဲ ထွေးပွေ.ပေးကာ ငြိမ်သက်ခြင်း ပေးနေ အမြဲသာ ကိုယ်တော်သာ ခိုလှုံရာ Bridge: (ကိုယ်တော်ကို ကျွုန်ုပ်လိုအပ်သည်)၄ ကိုယ်တော်သာခိုလှုံရာ
verse 1: နေ့ရက်တိုင်း ကျွန်ပ် ဆာငတ် ဝိညာဉ်အတွင်းထဲကတောင်းတ အခြားအရာရာတွေ ထက်မှာ လိုနေချင်တာ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ် ကိုယ်တော်ဘုရား မျက်မှောက်တော်မှာ ရွှေနှင့်ငွေတွေ အထက်မှာ လိုနေတာ Cho: ကိုယ်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်း ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ အတူရှိခြင်း မျက်မှောက်တော်မှာ မဖြစ်နိုင်တာလဲ မရှိ မတတ်နိုင်တာလဲ မရှိ ကိုယ်တော်ရဲ့အတူရှိခြင်း ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ အတူရှိခြင်း မျက်မှောက်တော်မှာ စိုးရိမ်စရာ ကင်းမဲ့ ကိုယ်တော်ဘုန်းနဲ့ ပြည့်စုံတယ် bridge:...
Verse 1: စုံစမ်းခြင်းတွေကို ရင်ဆိုင်နေရလည်း အခက်အခဲပြသာနာများ သင်ကြုံ တွေ.လည်း အရာရာကိုပိုင်သသူ ကိုယ်တော်ရှိ နေတယ် ခံစားရဒုက္ခ တွေအတွက်သူဖြေရှင်းခဲ. Verse 2: တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီး အဖော်မဲ့လို. အားငယ်နေပြီလားလေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင် ကိုယ်တော်ရှိ နေတယ် သင့်အနားရှိကာရယ် အဖော်ပြု ပေးတယ် Cho: နေ.ရက်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ်တော်ရဲ. ဂရုဏာသစ် ခံစားရပြီ ဘာလိုသေးလို.လဲ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ လာမည့်နေ.အနာဂတ်အတွက် မမူတော့ပါ ကိုယ်တော်ရှိ နေတယ်..
verse 1: ပြောရမယ့်စကား ရှိရမယ့်နေရာ ဝိညာဉ်တော် ကိုယ်တော်သွန်သင်ပေးမှုပါ လုပ်ရမယ့်အရာ သွားရမယ့်နေရာ ဝိညာဉ်တော် ကိုယ်တော်သွန်သင်ပေးမှုပါ pre cho:ကိုယ်တော်ရှိသောနေရာကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာ ကိုယ်တော်ရှင် သွားတဲ့နေရာကျွန်ုပ်သွားမည် Cho: ကျွန်ုပ် ဘဝမှာကိုယ်တော် မရှိရင် ရှေ့ဆက်လို့ မရနိုင်ပါနေ့ရက်တိုင်းမှာ ကျွန်ုပ် ဘဝမှာကိုယ်တော်ကြောင့်သာ အသက်ရှင်သူပါထာဝရကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်မယ်
[ Verse 1 ] အရာရာမှာ စုံလင်တာ မျက်မှောက်တော်ပဲ ရင်ခွင်မှာ ကိုယ်တော်ကို တောင့်တ ခြောက်သွေ့ ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံး ကိုယ်တော့်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ထဲ ခေါ်ဆောင်ပါ [ Verse2] မြင်ချင်တယ်ကိုယ်တော်ရဲ့ မျက်နှာတော် နှလုံးသားက တောင့်တလို့ ဟစ်အော် ကိုယ်တော့်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ထဲ ကိုယ်တော့်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ထဲ အနေချင်းဆုံးပါ [ Chorus ] ကိုယ်တော်ရဲ့ မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ...
Verse: ယေရှု ကိုယ်တော်အကောင်းမြတ်ဆုံး ယေရှုအံသြဖွယ်ဖြစ်သည် နာမတကာတို့ထက် ကိုယ်တော်နာမ ချီးမြောက်မည် ကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိသော အံဘွယ်အရှင် Pre chorus: (ဘုန်းကြီးခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်း ခံထိုက်မှုသည် လက်များမြှောက်ပင့်လျက်ကိုးကွယ်မည် သန့်ရှင်းနာမတော်မြတ်ကို) ၂ Cho: (ကြီးမြတ်မှုသော နိမိတ် လက်က္ခဏာ များပြုသော ကိုယ်တော်ကဲ့သို့သူမရှိ ကိုယ်တော်ကဲ့သို့သူမရှိ)၂
Verse 1: မျက်မှောက်တော်ထဲ ကျွန်ုပ်ရှိနေခြင်း သခင့်မျက်နှာတော် ကျွန်ုပ်ဖူးမျော်ခြင်း အရာရာကိုယ်တော်ကြောင့်ဖြစ်လာသည် ကိုယ်တော်ကြောင့်အသက်ရှင်သည် တကယ်ပါကိုယ်တော်ဖို့ဖြစ်လာသည် ကိုယ်တော်အားဖြင့်သာ CHO: အဖကိုယ်တော်ကြောင့်နော် ကျွန်ုပ်ဘဝ ကိုယ်တော်ကြောင့်ပေါ့ ကျွန်ုပ်အသက်တာ ယခုချိန်ထိ သီချင်းများ ဆိုနုင်ရာ အဖကိုယ်တော်ကြောင့်နော် ကျွန်ုပ်ဘဝ ကိုယ်တော်ကြောင့်ပေါ့ ကျွန်ုပ်အသက်တာ ယခုချိန်ထိ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာ ကိုယ်တော်ကြောင့်နော် Verse 2: ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုယ်တော်အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်း ကိုယ်တော်ကျေးဇူးကြောင့်သာ ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုယ်တော်အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်း...
(ကိုယ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ခွန်အားရစေသည်)2 ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ခွန်အားရစေသည် (သင်လည်းဝမ်းမြောက်လိုလျင် အသံလွှင့်ချီးမွမ်းလော့)2 (အသက်စမ်းရေပေးသောကြောင့် ရေမငတ်တော့ပေ )2 ( စိတ်ညစ်စရာဒုကတွေလျင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း )2 ( ဟာဟာဟာဟာဟာဟာ ဟာလေလုယာ ) 2